Chishandiso Chakanaka cheKufuridzira kana Mutapi wenhau Kuparadzira | Martech Zone
Chishandiso Chakanaka cheKufuridzira kana Mutapi wenhau
Chishanu, February 14, 2014 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Meltwater anga ari mutsigiri mukuru webhurogi redu. Isu takaita webhusaiti yepasi rose navo pakuteerera munharaunda yaive jam yakazara uye yaive nemhinduro hombe. Uye isu tave kuda kugadzirira kuburitsa yedu yekutanga infographic navo! Iyo yekutsigira yakanangana neNhau dzavo neBuzz zvigadzirwa zvekuteerera zvetsika nemagariro, zvichiteerana, asi ini ndaida kuunza chimwe chinhu cheNhau chigadzirwa chavo chePublic Relations nyanzvi chinoita hupenyu hwangu se kuchinja tani iri nyore…
Mazhinji mapaki andinogashira kubva kune Ruzhinji Rwehukama nyanzvi anouya kubva kune yavo yega kero uye ari batch uye blast zvinosemesa izvo zvinovhara bhokisi rangu reinbox. Ava vanhu vanoshandisa echinyakare PR ekutsvaga maturusi ayo anonyora yangu email kero uye ivo SPAM iko kukanda kunze kwangu. Ivo havanzwisise maitiro namira blogger uye ndine chivimbo vatori venhau senge avo maitiro kunyangwe zvishoma.
Ini ndinopindura kune mashoma kana asina basa mapango asingatenderi kuti munhu wacho atore maminetsi mashanu kuti aone kana zvemukati zvirimo kune mutengi wavo. Ini handifunge kuti vazhinji vavo vanozviita nekuti ivo vari kukurumidza uye havafungi kuti kune mhedzisiro yezviito zvavo. Asi zviripo. Vaya vakaita seni vanobva vatomhan'ara seJunk kuitira kuti tisazomboona imwe pini mubhokisi redu rekunyora. Izvo chaizvo zvinosuruvarisa kune iye munhu wePR - uyo rimwe zuva angave akave neakakura pombi kune yedu blog.
Nezuro, ndakagamuchira danda email kubva kuPPR Agency ichishandisa Meltwater's PR inosvika kunze zvishandiso. Ini handitaure iye anotumira sezvo anga asiri akakodzera - asi iyo email yaive HTML ine magirafu uye yaive neyakanakisa sarudzo pasirese pairi - an kuzvinyorera chinongedzo. Kudzvanya iyi link, ndakaunzwa kune imwe skrini:
Wow, sarudzo yekuzvinyora kubva kune aya mapaki kana kunyangwe dhatabhesi rese rezvenhau! Izvo zvine simba, zviripachena uye zvinobata PR agency uye Meltwater vanozvidavirira kune chero munhu ari kushungurudza system yavo. Kunyanya kunakidza isarudzo yeemail ichibva kuMeltwater kana kuendeswa kune yako email sevhisi. Ndiyo imwe nhanho yekuzvidavirira nekuti vatengi vazhinji veemail vanopa kugona kuendesa email kero otomatiki kana kutomboavharira.
Kana iwe uri kutungamira hunyanzvi hukama hweveruzhinji kana inosvikira agency uye uchinyatsoda kuti timu yako iumbe hukama (sezvavanofanira kunge vari) uye voita kuti vazvidavirire, urwu ndirwo rudzi rwechishandiso chaunoda kuti usvike. Pasina kutaura Meltwater ine anopfuura 350,000 midhiya vanobata mune yavo dhatabhesi neine toni yeruzivo pane yega yega kuti ikubatsire iwe kuwana vakarurama vanokurudzira uye vatapi venhau.
Kuzivisa: Iyi posvo yakanga isina kukumbirwa naMeltwater, zvaive zvese ini.
Tags: pitchnamira emailkudzika vanokurudziravachikanda vatori venhauprhukama hwevanhu
Kukura Kubiridzira kweMukati Kushambadzira
Izvo Zvekare, Zviripo, uye Ramangwana reKushambadzira Pamhepo